Safiirka Mareykanka ee Shiinaha oo la shaaciyey in uu is-casilayo
WASHINGTON, US – Danjiraha Mareykanka ee Shiinaha, Terry Branstad, ayaa xafiiska faarujin doona horaanta bisha October, sidda lagu sheegay qoraal kasoo baxay safaarada Washington iyo Qunsulyadaha ee China.
Sidda laga soo xigtay war-saxaafadeedka soo baxay Isniinta maanta ah, 73-sano jirkaan ayaa go'aankiisa u xaqiijiyey madaxweyne Donald Trump kadib wadahadalo dhanka telefoonka oo asbuucii hore dhexmaray.
Branstad, gudoomiyihii hore ee gobolka lowa, ayaa xilkaan qabtay 2017-kii, sanadkii ugu horeeyay ee madaxtinimadda Donlad Trump.
Shaqo ka tagistiisa ayaa kusoo hagaageysa xilli cilaaqaadka u dhaxeeya Beijing iyo Washington uu muddooyinkii dambe ahaa mid sii xumaanayey.
Mike Pompeo, xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka oo fariin soo dhigay bartiisa Twitter-ka, ayaa si weyn ugu mahadnaqay Branstad.
Afhayeen u hadlay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Shiinaha ayaa sheegay in ay kaliya arkeen fariimaha Twitter-ka, balse aan lagu soo wargelin.
"Kaliya waxaanu ka war-helnay fariimaha lagu baahiyey Twitter-ka, mana helin wargelin la xiriirta in Terry Branstad uu is-casilayo," ayuu Wang Wenbin ku sheegay shir jaraa'id oo uu kaga jawaabay warbixinadaan.
Mareykanka iyo Shiinaha oo safka hore kaga jira dhaqaalaha iyo horumarka caalamka ayaa ku loolaya cidda liijaanka u qabaneysa casriyeynta dunida, iyaddoo mid walba uu u han-qal0-taagayo in uu isaga helo labinta.
Booliska oo Gurigiisa kala baxay Macallin Jaamacadeed
Caalamka 02.08.2018. 11:01
Xiliga guriga lagu jabiyey macallinku waxa wareysi khadka telefoonka ah oo toos ah kula...
Shiinaha oo farta ku fiiqay dalka "abuuray" caabuqa Coronavirus
Caalamka 12.03.2020. 21:11
Shiinaha oo markab dagaal u soo diray xeebaha Soomaaliya
Soomaliya 08.12.2019. 17:08
Cudurka Coronavirus oo faraha kasii baxaya; tiradda oo korodhay
Caalamka 06.02.2020. 16:12
Dayax-gacmeedkii ugu horeeyay ee Suudaan oo hawada loo diray
Afrika 06.11.2019. 15:27
Xiisadda xadka ee Shiinaha iyo India oo oo galaaftay nolosha 20 askari
Caalamka 17.06.2020. 17:16
Taliban oo ku qulqulaysa dalka Shiinaha
Caalamka 23.10.2019. 13:15